Tajikistàna: Manana Faharetana Amin’ny Krizin’ny Angovo Ny Olona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2018 11:56 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, Español, 繁體中文, English
Ny fitohizan'ny krizin'ny angovo lavareny, angamba, no olana ratsy indrindra atrehan'i Tajikistàna hatramin'ny fiafaran'ny ady an-trano. Taterin'ny Neweurasia fa zara raha ho tafavoaka velona ny ankamaroan'ny mponina amin'ity ririnina ity – ny mafy indrindra tao anatin'ny am-polo taona maro – miaraka amin'ny fahatapahan'ny herinaratra maharitra. Tena mahakivy ny toe-draharaha satria ny herinaratra no hany loharanon-kafanana manerana ny firenena.
“Amin'izao fotoana izao, ora iray sy sasany isanandro ihany ireo mponina any ambanivohitra no mahazo herinaratra. Any Dushanbe, manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 ora ny maraina ary manomboka amin'ny 5 ora hariva ka hatramin'ny 10 ora alina no mahazo herinaratra ny mponina. Ankoatr'ireo fotoana voafetra ireo, dia tsy manana herinaratra ny mponina ary vokany, tsy misy fanafanàna, tsy afaka mahandro sns… Mikatona ny ankamaroan'ny orinasa ary voatery nalefa hiala sasatra tsy mandray vola ny mpiasa”, hoy ny tatitry ny neweurasia.
Notsinian'i Ravshan ny governemanta noho ny haratsian'ny fitantànana eo amin'ny sehatry ny angovo sy ny tsy fetezana eo amin'ny fitantànana olona. Mandritra izany fotoana izany, tsy voahaja ny fandaharam-potoana amin'ny fanapahana henjana ny herinaratra na dia any Dushanbe aza :
Araka ilay fandaharam-potoana, dia tokony ho ora folo isanandro ny olona no mahazo herinaratra, kanefa matetika dia tara adiny iray ny fahaveloman'ny herinaratra ary tapaka adiny iray mialoha. Amin ‘ny ankapobeny 8 ora fotsiny no ananan'ny olona herinaratra ao anatin'ny andro iray… Tsy manan-ko lazaina ny olona satria mari-pahaizana ambony momba ny fambolena sy fiompiana no ananan'ilay Minisitry ny angovo sy ny indostria ka tsy manana hevitra ny amin'izay fomba hitantanana ny sehatry ny angovo izy. Ankoatr'izay, tsy mbola niasa mihitsy tamin'ny tontolon'io sehatra io izy. Tsy mbola nilaza tamintsika ihany koa ry zareo fa ao anatin'ny hamehana dia amidy any amin'ny firenena hafa ny herinaratra. Tsy miteny na inona na inona momba ny zavatra manan-danja lehibe tahaka izany ry zareo…
Ampifandraisin'i Ian ao amin'ny Beyond the river (ankoatry ny riana) ireo zava-mahatalanjona raha tsy izany mety tsy hanam-paharetana miaraka amin'ny mpitarika ny ankamaroan'ny vahoaka, tahaka ity mpisolovava tsy mitonona anarana ao amin'ny tatitry ny Eurasianet ity : .
“Misy fomba fijery anankiroa ao amin'ny fiarahamonina misy anay. Hitanay ny fananganana ireo toerana vaovao maro any Dushanbe, trano fandraisam-bahiny kintana dimy…. Ary hitanay ihany koa ireo fiara raitra sy trano lafatra ao an-tanàndehibe. Fantatry ny rehetra ny tompon'ireny zavatra ireny. Ireo “tompon'ny fiainana” ireo no mifehy ny toekarena, saingy marenina ry zareo eo anoloan'ny fikiakiaky ny vahoaka. Amin'ny lohataona, dia hiatrika loza iray hafa goavana isika – rano maloto amin'ny paompy. Ary mbola hiantso ny fanampiana iraisam-pirenena indray isika. Miverimberina foana izany.”
Raha ny marina, niaiky tamin'ny fomba ôfisialy ny tsy fahaizan-dry zareo mamaha ny krizin'ny angovo tamin'ny alàlan'ny fiantsoana ny fanampian'ny vondrona iraisam-pirenena ireo manampahefana tajikistàna. Azo antoka fa tsy ny tsara indrindra ny mpitarika antsika saingy – amin'ny fomba maneso – hitodika foana any amin'ny namantsika any atsimo, i Afghanistana, nefa tsy te-hamerina ny zavatra niainany. Inty no fitondrantena lasitra ho an'ireo firenena sovietika taloha – “ny tahotra ny ratsy kokoa” no sakana amin'ny fahafahana manohitra ary ny fahafantarana tsotsotra ny atao hoe fahamarinan-toerana no ampiasaina handrakofana ny tsy fivoarana. Raha ny fahitana azy dia toa manana faharetana ny vahoaka satria mbola tsaroany tsara ny ady. Saingy vantany vao very ny faharetany, dia mety betsaka ny vina hamerenan'i Tajikistàna ny zavatra niainan'i Afghanistàna izay tena tsy irian'ny olona.
7 ora izayAzerbaijan